बिचार र भावनाको आदानप्रदान गर्ने थलो हो ब्लग : गरिमा लुईंटेल - MeroReport
बिचार र भावनाको आदानप्रदान गर्ने थलो हो ब्लग : गरिमा लुईंटेल
आफ्नो नाम जस्तै गरिमामय काम गर्न कम्मर कसेर लागिरहेकी गरिमा लुईंटेल शंकरदेब क्याम्पसमा ब्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत छिन् । फुर्सतको समयमा लेख्न र आख्यान तथा छन्द कविता पढ्न रुचाउँने गरिमालाई संगितमा पनि निकै रुचि छ । नयाँ नयाँ ठाँउ घुम्न मनपराउने गरिमा ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन । मेरो रिर्पोटको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै गरिमा लुईंटेललाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानी :
गरिमा लुईंटेललाई सोसल मिडियामा के भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ ?
म फेसबूक, ट्वीटर अनि ब्लग चलाउँछु । फेसबुके, ट्वीटे सँगै ब्लगर भनेर चिन्दा पनि फरक पर्दैन होला । समय र परिस्थिति अनुसार जस्ले जसरी चिन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि ठिकै छ । नामको अगाडि विशेषण जोड्न अग्रसर छु, अहिले ‘गरिमा’ मात्र भनेर चिन्दा उचित होला ।
इन्टरनेटको दुनियाँमा सानैदेखि प्रवेश गर्ने मौका पाएँ । कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा मेरा बालकविताहरूको सङ्ग्रह ‘झुल्के घाम’ नामक कृति प्रकाशित भयो । त्यसपछि लेख्ने क्रम बढ्दै गयो । मैले ब्लग त्यसपछि लेख्न थालेकी थिएँ । सायद सन् २००९ देखि नै हो । एसएलसी पछि झण्डै दुई बर्ष सहित्यतर्फ अलि वितृष्णा जाग्यो । पछि पुरानो ब्लगको पासवर्ड बिर्सिएछु । अनि नयाँ सुरु गरेकी हुँ ।
के का लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ ? कस्ता विषयवस्तु तपाईको रोजाईमा पर्छन् ?
मनका कुराहरू बेफिक्री पोख्ने थलो जस्तो लाग्छ । विशेष गरी आफ्नै भोगाइ अनि भावनात्मक अनुभूतिहरू कविता,गजल र अन्य अभिव्यक्तिका रूपमा समावेश गर्ने गर्छु ।
तपाईले http://waterinoasis.blogspot.com/ बाहेक अरु पनि चलाउनु हुन्छ ? अनि ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ त ?
अहिले यही एउटै मात्र चलाउँदै छु । यो संसारमा कुनै पनि कुरा अपेक्षा गरे जति सजिलो हुँदैन अनि सोचे जति गाह्रो पनि हुँदैन । मन लागेको कुरा शब्दमा उतारेर ब्लगमा राख्ने भएको हुनाले सजिलो र गाह्रो भन्दा पनि समय र मनको कुरा हो मेरो लागि ।
तपाईको त ब्लगमा साहित्यिक खुराक धेरै छन्, ब्लग पढेर पाठकले कस्तो प्रतिक्रिया दिनु हुन्छ ?
धेरै जसो कविता नै लेख्ने गरेकी छु । सबैले अझै राम्रो लेख्न हौसला दिनुहुन्छ । प्रेरणाको स्रोत भनेका पाठक नै हुन् नि ।
आफ्ना कुरा ब्यक्त गर्न अहिले युवाहरू ब्लगिङ्गप्रति आर्कषित भई रहेका छन, नेपाली ब्लगिङको प्रयोगलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोग ?
हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटा हुन्छन् । बिचार र भावनाको आदानप्रदान गर्ने थलो हो ब्लग त्यसलाई सदुपयोग नै भन्नु पर्छ ।
ब्लगिङ वा ब्लगरका लागि आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरा पनि उठिरहेको हुन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागि आचारसंहिता ?
हुन त ब्लग स्वतन्त्र भएर लेखिन्छ तर हरेक कुरामा अनुशासनको जरुरत त पर्छ नै । अहिले धेरैले ब्लगमा अश्लील सामग्री समेत राख्ने गरेको पाइन्छ । जेसुकै कुरामा सीमा त हुन्छ नै । सीमा नाघ्नेहरूका निम्ति चाहिँ आचारसंहिता आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ ।
नेपाली ब्लगरले आचारसंहिता कत्तिको पालना भएको पाउनु भएको छ ?
पुराना ब्लगरहरुमा भन्दा पनि नयाँ ब्लगरहरुमा अनुशासनको कमी देख्छु म । सोसल मिडिया बिस्तारै घटना, समाचार र जानकारीका स्रोत हुन थालेका छन् । सञ्चार माध्यममा आउनुभन्दा पहिले नै कतिपय जानकारी सोसल मिडियामा भेटिन थालेका छन् ।
केहीले ब्लगिङलाई नागरिक पत्रकारिता पनि भन्ने गरेको पाइन्छ । के ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता नै हो त ?
राम्ररी सोच्ने हो भने त ब्लगिङ एक प्रकारको पत्रकारिता नै हो तर ब्लगमा वैयक्तिक रुचिका सामग्रीहरू बढी हुन्छन् । त्यसैले ब्लगिङलाई नागरिक पत्रकारिताको रुपमा परिभाषित नै गरिहाल्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन ।
यस रिपोर्टमा मलाई पनि यो प्लेटफर्म दिएकोमा निकै खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइरहन आग्रहसँगै शुभकामना पनि ।
Comment by Prakash Lamichhane on January 8, 2015 at 11:50am
हार्दिक बधाई तथा शुभकामना गरिमा ।